ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ (ပေမယ့် အမျိုးသမီးများ၏ ဦး နှောက်သည်လည်းအလွန်အကျွံစိတ်ဖိစီးမှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ) ယောက်ျားသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ seductive ဖို့အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်သူတို့ကိုဆပ်အချို့ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
2002 ကနေဒါသုတေသီများအတွက် ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဘာသာရပ်များ၏နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဦးနှောက်ပုံရိပ်များ သူတို့ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကောက်နှုတ်ချက်ကြည့်ရှုအားပေးနေစဉ်။ ယောက်ျားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလိင်အလားတူသက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်ဒေသ activation ပြသနေစဉ်, သာလူတို့သညျ hypothalamus ၏သိသာထင်ရှားသော activation ပြသခဲ့သည်။
ကြည့်ရှု erotica အဆိုပါ hypothalamus မှလေးစားမှုနှင့်အတူကဒီမှာတွေ့ရတဲ့ functional ဖြစ်စေကျားမကွာခြားချက်နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအခါ သာ. ကြီးမြတ်လိင်စိတ်နိုးထယေဘုယျအားဖြင့်လူတို့ကြုံတွေ့ကြောင်း [ဒီသုတေသနအကြံပြု] ။
hypothalamus သည် ဦး နှောက်၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလမ်းကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းလုပ်ဆောင်မှုသည်များစွာကျယ်ပြန့်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်တို့ကိုပေါင်းစပ်ရန်ဌာနချုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် endocrine စနစ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာရုံကြောစနစ်အတွက် command command ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလိုဆန္ဒများ, စိတ်ခံစားမှု၏ထိုင်ခုံဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အတွေးတိုင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ အလိုဆန္ဒနှင့်လှုံ့ဆော်မှုတိုင်းတွင်ကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လိင်ဟော်မုန်းများအားလုံးကိုထိန်းချုပ်သည်။
ဤအရုပ်ပုံများကိုသူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးရဲ့မပေးနိုင်မယ့်လမ်းအတွက်အထီးဦးနှောက်ရဲ့ command ကိုအလယ်ဗဟို hijack နိုငျသောကွောငျ့တိုတိုအတွက်, ယောက်ျားညစ်ညမ်းပုံရိပ်များဖို့အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ hypothalamus လည်းငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့် satiation-in ကိုနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းဆုံးဖြတ်သည်ကြောင်းဗဟိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မြည်အစာအိမ်အဖြစ်လူတသဘာဝဟာကင်ပေါ်အစားအစာ၏အနံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတစ်ခု arousal တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ယောက်ျားကြိုးမည်သို့ရှင်းလင်းမယ့်အကြောင်း, ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဒီနေ့ရဲ့ရေလွှမ်းမိုး၏ဂယက်ရိုက်စဉ်းစားပါ။ လူ့ဦးနှောက်ကိုဗျူဟာမြောက်ယောက်ျားဦးနှောက်ကဒီအားနည်းချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလှုံ့ဆော်ရန်တွက်ချက်သောထိုကဲ့သို့သောချေမှုန်းရေး, နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖို့ဘယ်တုန်းကမှမရှိဖူးဘူး။ အနည်းငယ်တိုတောင်းသောဆယ်စုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့လုလင်တို့သည်များသောအားဖြင့် National Geographic အတွက်ရှင်းလင်းသောရင်သား၏သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပုံရိပ်ကိုတကွက်တယ်။ ထို့နောကျ "Playboy", "Hustler," X-rated ရုပ်ရှင်, ခက်-Core porn နှင့်ယခုအင်တာနက်အခမဲ့, ဘယ်တော့မှ-အဆုံးသတ်အသစ်အဆန်း (ကို virtual-အဖြစ်မှန် porn ဖော်ပြခြင်းမ) သို့ရောက်ကြ၏။ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုနေတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်စမ်းသပ်မှုအတွက် guinea ဝက်ဖြစ်ကြသည်။ အထီးဦးနှောက်ကိုကောင်းစွာသင့်လျော်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအတော်လေးဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဒီ Overload ကိုင်တွယ် သူတို့ရဲ့ equilibrium ဆုံးရှုံးမပါဘဲ erotica ၏။
ယောက်ျားဦးနှောက်၌ဤပင်ပြောင်းလဲယန္တရားပိုမိုသက်သေပြကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောက်ဝမ်းကွဲကနေလာပါတယ်။ မြင် အထီးမျောက်အမျိုးသမီးမျောက်ခွကြည့်ရှုရန် "ပေးဆပ်" ဦးမည်
testosterone အစွမ်းထက်ပစ္စည်းပစ္စယဖြစ်ပြီး, ယောက်ျားပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအဖြစ်ဤဟော်မုန်းတာအဖြစ်တစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်မှကြိမ်ရှိသည်။ တဦးတည်းအမျိုးသမီး-to-အထီးတယောက်သောသူကဆိုပါတယ် သူမ၏ testosterone ဟော်မုန်းကြီးပြင်း လိင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ဆက်စပ်. အထီးအဆင့်ဆင့်မှ,
ငါတစ်နေ့တစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်သေလိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ် ... ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး အဖြစ်ညစ်ညမ်းမှုသို့ဖြစ်ခဲ့သည်, သို့သော်ယခုငါတကယ်ညစ်ညမ်းသို့။
porn ပုံရိပ်တွေ testosterone ဟော်မုန်းပြုစုပျိုးထောင်ဖို့များပါတယ်, ဒါပေမယ့်လွှမ်းမိုးမှုကို themes များဆက်ဆက်ပြုမည်-ဖြစ်ကောင်းအထီးဦးနှောက်ဆုလာဘ်ယောက်ျားကြောင့် alpha အထီးတစ်အနွယ်အတွက်အနေအထား, တပ်ဖွဲ့, သို့မဟုတ်အခြားအုပ်စုကြိုးပမ်းသည်။ မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်, ရလဒ် porn အတွက်လွှမ်းမိုးမှုကို themes များအပိုနီကိုတင်းနှင့်အတူစီးကရက် lacing အဖြစ်တွက်ချက်နေကြသည်အဖြစ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ; သူတို့လူတို့အားညစ်ညမ်းပိုပြီးစွဲလမ်းစေ။
တချို့က porn ထုတ်လုပ်သူတမင်တကာကိုကြည့်ရှုသူများအတွက် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်တိုးပွါးလာကြောင်းပုံရိပ်အသုံးပြုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ testosterone တဦးတည်းကပို, (testosterone ဟော်မုန်း dopamine, ထိုတဏှာ neurochemical ပေါ်ပေါက်), ကိလေသာလွန်ကျူးပိုပြီး irascible နှင့်ဒီထက်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်စေလေ့ရှိတယ်။ ယင်း၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဦးပထမဦးဆုံးလက်အကောင့်တွေ့ ဤဆောင်ပါး။ တစ်ဦးက 2015 meta လေ့လာမှုကတွေ့ရှိခဲ့သည် porn အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုကျူးကျော်နှင့်ဆက်စပ်သည်နှင့် 2016 လေ့လာမှု compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူရှိသူများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ ပိုပြီးရန်လို အခြားအစွဲထက်။ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမ ရန်လိုပြုမူဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအခြေအနေ, သို့မဟုတ်ပါကပိုပြီးရန်လိုသည်အသုံးပြုသူများမှအယူခံ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးသနည်း?
ဒါဟာယောက်ျားအလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ဖြစ်ကြောင်းစှဲဖို့ သာ. ကြီးမြတ်အားနည်းချက်ရှိသည်ပေါ်လာသည်။ တစ်ဦး 2006 လေ့လာမှု၌, သိသိသာသာပိုပြီး dopamine ဖြန့်ချိယောက်ျား စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန်အတွင်းအမျိုးသမီးများထက်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောဒီတော့အလွယ်တကူအားကစားကြည့် Off-လမ်းကြောင်းလောင်းကစားများနှင့်အကြမ်းဖက် porn ချိတ်ယောက်ျားအဖြစ်အဘယ်ကြောင့်လှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားမှုများရှင်းပြကူညီပေးသည်။ ဒါဟာအီဗိုလူးရှင်းသောအရာတို့ကိုမှီအောင်လိုက်နဲ့အောငျနိုငျဖို့ယောက်ျားအားပေးသောမျိုးဗီဇ၏ရွေးချယ်ရေးမျက်နှာသာပုံရသည်။
ဒါကြောင့်အစာရှောငျ-PACE မှကြွလာသောအခါထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ယောက်ျား, Hyper-ခေါ်ဆောင်သွား, အမာခံအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ရှိပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, porn ထုတ်လုပ်သူလည်းအမျိုးသမီးကြည့်ရှုရန်အယူခံဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနေကြပေမယ့်အမျိုးသမီးများကိုအမြဲယေဘုယျအားဖြင့်, porn စွဲဖို့လျော့နည်းအားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။